Apple inotanga Beta itsva uye tinosvika iOS 15.6 | Nhau dze iPhone
Apo vazhinji vedu taive tatopedza zvigadziriso zvakakura zveIOS 15, Pasati papera mwedzi WWDC 2022 isati yasvika, Apple inoenda kunotanga iOS 15.6 Beta yekutanga., pamwe chete nemamwe maBeta emamwe mapuratifomu.
Apple haina kuzorora, uye zvisinei nekuti iOS 16 isingasviki mwedzi isati yaratidzwa kune veruzhinji, kunyangwe vhezheni yayo yekupedzisira isingasviki kusvika zhizha rapfuura, ichangobva kutangisa Beta nyowani yeichave inotevera. update ye iPhone uye iPad yedu. Beta 1 yeIOS 15.6 uye iPadOS 15.6 yave kuwanikwa kune vanogadzira, uye inotarisirwa kusvika kune vashandisi vakanyoreswa muApple's Public Beta chirongwa munguva pfupi. Asi kwete chete maBeta aya ekutanga akaburitswa e iPhone ne iPad, tIsu tine zvakare shanduro nyowani dzeApple Watch, watchOS 8.7 Beta 1, yeHomePod, HomePod 15.6 Beta 1, uye yeApple TV, tvOS 15.6 Beta 1.. Iyo Mac haisi kure kumashure uye isu tine macOS 12.5 Beta 1 iripo, uye haisi kusiya vatatu vasina kukwanisa kugadzirisa kuMonterey, zvakare kutanga Beta yekutanga yeMacOS 11.6.7.
Isu hatizive nhau dzinounzwa neshanduro itsva idzi, dzatiri kutotora pamidziyo yedu. Mushure mekuona mashoma (kana anenge zero) nhau dzeIOS 15.5 isu hatina tariro yakawanda yakaiswa mune aya ekutanga betas eIOS 15.6 (uye mamwe ese), asi kunyangwe Izvi zvingangove kuvandudzwa kwekuita uye kugadzirisa kwebug., panogona kunge paine kushamisika kweminiti yekupedzisira yatichakuudza nekukurumidza sezvatinoziva nezvazvo. Iko kushamisika kukuru kunotarisirwa muna Chikumi 6, apo isu tinotarisira akawanda matsva maficha nekusvika kweIOS 16, watchOS 9 uye macOS 13.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » Apple inotanga Beta itsva uye tinosvika iOS 15.6
Zvakanaka, ngationei kana izvi zvichigadzirisa matambudziko ane chekuita nehomepod uye siri kamwechete...
Pindura Ricky García
USB-C: Shanduko yekubatanidza inogona kuwedzera kune zvese zvigadzirwa